Ford v Ferrari ဆိုတာထကျ Operation Vs Management ကိုခံစားလိုသူတှအေတှကျ - Myanmar Automobile and Equipment Directory
စကားလုံးအလှအပတှထေကျ တညျ့တိုးအိုးပေါကျနဲ့ လိုရငျးကိုခပျမွနျမွနျပွောတတျသူလား…..
ဒါတှနေဲ့ကိုကျညီနပွေီဆိုရငျတော့ Ford v Ferrari မဖွဈမနကွေညျ့သငျ့ပွီပေါ့။
ဇာတျလမျးသဘောက Ford v Ferrari ဆိုတာထကျ ……. Operation v Management ပိုငျးကိုလညျးသှားတယျလို့ ကြှနျတျောထငျတယျ။ ဇတျလမျးအမြားစုမှာ Ford အနနေဲ့ Ferrari ကို ဘယျလိုပွိုငျမလဲဆိုတာထကျ ကုမ်ပဏီကွီးတှမှော ရှိတတျတဲ့သဘောတရားကို ခပျပါးပါးစီလှဈပွ ထားတယျ။
အစီရငျခံစာတငျတယျ။ အလှာဘယျနှဈလှာ၊ လကျဘယျနှဈယောကျပွောငျးတယျ၊ အထဲမှာဘာတှေ ပွောငျးလဲသှားမလဲ။ (Matt Damon as Carroll Shelby)
ဒီကုမ်ပဏီကို ဦးဆောငျနတောတဈယောကျပဲရှိတယျ၊ အဲဒီသူကိုပဲ အစီရငျခံရမယျ။ (Henry Ford II)
ကိနျးကွီးခနျးကွီးတှနေဲ့ အဆငျမပွပေဲ အဆငျ့ဆငျ့ခံနရေရငျ လုပျရကိုငျရတာ စိတျခမျြးသာမှာမဟုတျ ဘူးလို့ တညျ့တိုးအိုးပေါကျပွောတတျတဲ့ (Christian Bale as Ken Miles)
Senior Management level ဆိုတာက မောငျးနတေဲ့ကားရဲ့ အငျဂငျြရုနျးအား (RPM) ကိုတောငျ ထိနျးခြုပျထားတယျ။ ကြှနျတေျာ့ဆုံးဖွတျသာအတညျပါဆိုတဲ့ [Josh Lucas (Senior executive vice president)]
Operation နဲ့ Management မှာဆိုရငျ Management ပိုငျးကို စိတျခမျြးသာအောငျ ဘယျလိုထား ရမလဲဆိုတာ အရငျးအနှီးကွီးစှာဖွငျ့သကျသပွေခဲ့တဲ့ (Christian Bale as Ken Miles)
ဇတျလမျးလားတော့ မမေးနဲ့ ၂၀၂၀ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၀ ရကျနမှေ့ာကငျြးပမယျ့ အျောစကာဆုပေးပှဲ အတှကျ ဆနျခါတငျစာရငျး မှာ Ford v Ferrari က ၄ ဆုတောငျလြာထားခွငျးခံထားရသလို Box office ကလညျး ၁၉၃ သနျးကြျောနပေါပွီဆိုတော့ ……
ဒါ့အပွငျ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာပွညျရဲ့ပွညျတှငျးက Ford အနနေဲ့ကလညျး သူတို့ရဲ့ RSVP ကို ဖုနျးဆကျသှယျလာမယျ့ ပထမဆုံး ၅ ဦး ကို ကနျသာယာ JCGV မှာပွသမယျ့ Ford Vs Ferrari အတှကျ လကျမှတျတှေ မတ်ေတာနဲ့ဝပေေးသှားခဲ့တယျဆိုမှတော့ ……
၁၉၆၃ခုနှဈမှာ ငှကွေေးအခကျအခဲဖွဈနတေဲ့ Itilyက ကားထုတျလုပျတဲ့ Ferrari Companyကို USက Ford Motor Companyဟာ ဝယျဖို့ကွိုးစားတယျ။ ဒါပမေဲ့ နောကျထပျ Itilyက ကားထုတျတဲ့ Fiat Companyကနေ ပိုကောငျးတဲ့ အခှငျ့အလမျးနဲ့ Ferrari Companyကို ဆကျလကျ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ပါရတဲ့ အခှငျ့အရေးကမျးလှမျးလာတဲ့အတှကျ Fordဟာ အငွငျးခံလိုကျရပါတယျ။ လူကွီပိုငျးခငျြးပါ တငျစီးခံ လိုကျတယျပေါ့။
Ferrariကို အနိုငျယူခငျြတဲ့ Fordဟာ ပွငျသဈမှာ 24နာရီကွာ ကားမောငျးယှဉျပွိုငျရမယျ့ 24 Hours of Le Mansကား ပွိုငျပှဲမှာ ဝငျပွိုငျဖို့ ကွိုးစားပါတော့တယျ။ ၁၉၆၀ ကနေ ၁၉၆၅ အထိ ဆကျတိုကျ အနိုငျရထားတဲ့ Ferrariကို ယှဉျပွိုငျဖို့အတှကျ ကမ်ဘာ့အမွနျဆုံး ပွိုငျကားကို ထုတျလုပျဖို့လိုလာပါတယျ။
၁၉၅၉ခုနှစ Le Mansကားပွိုငျပှဲမှာ အနိုငျရဖူးတဲ့ Shelby American Company ပိုငျရှငျ Carroll Shelbyနဲ့ အကွောကျအလနျ့ကငျးတဲ့ Britishကားပွိုငျသမား Ken Miles တို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကမ်ဘာ့ အမွနျဆုံး ပွိုငျကားကို ထုတျလုပျယှဉျပွိုငျကွတာကို မွငျတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ..
Matt Damon ရဲ့ဖွတျထိုးဉာဏျ၊ ပါးနပျမှုနဲ့အတူ Ken Miles ရဲ့ ကွိုးစားမှု၊ စိတျအားထကျသနျမှုတှေ အပွငျ ကိနျးကွီးခနျးကွီးနိုငျလှတဲ့ ကုမ်ပဏီအခြို့ရဲ့လုပျဆောငျတာတှကေို မွငျတှရေ့မှာဖွဈလို့ လကျတှဘေ့ဝကို ထငျဟပျပွစမေယျ့ရုပျရှငျကားကောငျးလို့ ညှနျးဆိုခငျြပါတယျ။ ဖြျောဖွရေေးဆိုတာ ထကျကိုမြှျောလငျ့နသေူတှအေတှကျတော့ လကျလှတျမခံသငျ့တဲ့ ရုပျရှငျကားကောငျးတဈခုပဲဖွဈ ပါတယျ။
နောကျတဈပတျမှာတော့ ဒီဇာတျကားရဲ့ အဓိကသရုပျဆောငျအဖွဈအသုံးတျောခံခဲ့တဲ့ Ford GT40 အကွောငျးကို တငျဆကျပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီကားက ၁၉၆၇ ကနေ ၁၉၆၉ခုနှဈ ၃ နှဈဆကျတိုကျ 24 Hours Le Mans မှာအနိုငျရခဲ့တယျဆိုတာ အမွညျးပွောထားခဲ့ပါရစေ …….
Ford v Ferrari ဆိုတာထက် Operation Vs Management ကိုခံစားလိုသူတွေအတွက်
စကားလုံးအလှအပတွေထက် တည့်တိုးအိုးပေါက်နဲ့ လိုရင်းကိုခပ်မြန်မြန်ပြောတတ်သူလား…..
ဒါတွေနဲ့ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင်တော့ Ford v Ferrari မဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပြီပေါ့။
ဇာတ်လမ်းသဘောက Ford v Ferrari ဆိုတာထက် ……. Operation v Management ပိုင်းကိုလည်းသွားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဇတ်လမ်းအများစုမှာ Ford အနေနဲ့ Ferrari ကို ဘယ်လိုပြိုင်မလဲဆိုတာထက် ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့သဘောတရားကို ခပ်ပါးပါးစီလှစ်ပြ ထားတယ်။
အစီရင်ခံစာတင်တယ်။ အလွှာဘယ်နှစ်လွှာ၊ လက်ဘယ်နှစ်ယောက်ပြောင်းတယ်၊ အထဲမှာဘာတွေ ပြောင်းလဲသွားမလဲ။ (Matt Damon as Carroll Shelby)
ဒီကုမ္ပဏီကို ဦးဆောင်နေတာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်၊ အဲဒီသူကိုပဲ အစီရင်ခံရမယ်။ (Henry Ford II)
ကိန်းကြီးခန်းကြီးတွေနဲ့ အဆင်မပြေပဲ အဆင့်ဆင့်ခံနေရရင် လုပ်ရကိုင်ရတာ စိတ်ချမ်းသာမှာမဟုတ် ဘူးလို့ တည့်တိုးအိုးပေါက်ပြောတတ်တဲ့ (Christian Bale as Ken Miles)
Senior Management level ဆိုတာက မောင်းနေတဲ့ကားရဲ့ အင်ဂျင်ရုန်းအား (RPM) ကိုတောင် ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်သာအတည်ပါဆိုတဲ့ [Josh Lucas (Senior executive vice president)]
Operation နဲ့ Management မှာဆိုရင် Management ပိုင်းကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုထား ရမလဲဆိုတာ အရင်းအနှီးကြီးစွာဖြင့်သက်သေပြခဲ့တဲ့ (Christian Bale as Ken Miles)
ဇတ်လမ်းလားတော့ မမေးနဲ့ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် အော်စကာဆုပေးပွဲ အတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်း မှာ Ford v Ferrari က ၄ ဆုတောင်လျာထားခြင်းခံထားရသလို Box office ကလည်း ၁၉၃ သန်းကျော်နေပါပြီဆိုတော့ ……
ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းက Ford အနေနဲ့ကလည်း သူတို့ရဲ့ RSVP ကို ဖုန်းဆက်သွယ်လာမယ့် ပထမဆုံး ၅ ဦး ကို ကန်သာယာ JCGV မှာပြသမယ့် Ford Vs Ferrari အတွက် လက်မှတ်တွေ မေတ္တာနဲ့ဝေပေးသွားခဲ့တယ်ဆိုမှတော့ ……
၁၉၆၃ခုနှစ်မှာ ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ Itilyက ကားထုတ်လုပ်တဲ့ Ferrari Companyကို USက Ford Motor Companyဟာ ဝယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် Itilyက ကားထုတ်တဲ့ Fiat Companyကနေ ပိုကောင်းတဲ့ အခွင့်အလမ်းနဲ့ Ferrari Companyကို ဆက်လက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပါရတဲ့ အခွင့်အရေးကမ်းလှမ်းလာတဲ့အတွက် Fordဟာ အငြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ လူကြီပိုင်းချင်းပါ တင်စီးခံ လိုက်တယ်ပေါ့။
Ferrariကို အနိုင်ယူချင်တဲ့ Fordဟာ ပြင်သစ်မှာ 24နာရီကြာ ကားမောင်းယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် 24 Hours of Le Mansကား ပြိုင်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ၁၉၆၀ ကနေ ၁၉၆၅ အထိ ဆက်တိုက် အနိုင်ရထားတဲ့ Ferrariကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး ပြိုင်ကားကို ထုတ်လုပ်ဖို့လိုလာပါတယ်။
၁၉၅၉ခုနှစ Le Mansကားပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖူးတဲ့ Shelby American Company ပိုင်ရှင် Carroll Shelbyနဲ့ အကြောက်အလန့်ကင်းတဲ့ Britishကားပြိုင်သမား Ken Miles တို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကမ္ဘာ့ အမြန်ဆုံး ပြိုင်ကားကို ထုတ်လုပ်ယှဉ်ပြိုင်ကြတာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
Matt Damon ရဲ့ဖြတ်ထိုးဉာဏ်၊ ပါးနပ်မှုနဲ့အတူ Ken Miles ရဲ့ ကြိုးစားမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေ အပြင် ကိန်းကြီးခန်းကြီးနိုင်လှတဲ့ ကုမ္ပဏီအချို့ရဲ့လုပ်ဆောင်တာတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ လက်တွေ့ဘ၀ကို ထင်ဟပ်ပြစေမယ့်ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလို့ ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေရေးဆိုတာ ထက်ကိုမျှော်လင့်နေသူတွေအတွက်တော့ လက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ် ပါတယ်။
နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင်အဖြစ်အသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့ Ford GT40 အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားက ၁၉၆၇ ကနေ ၁၉၆၉ခုနှစ် ၃ နှစ်ဆက်တိုက် 24 Hours Le Mans မှာအနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုတာ အမြည်းပြောထားခဲ့ပါရစေ …….
Operation Vs Management
ကားဘကျထရီနှငျ့ ပတျသတျပွီး စဈဆေးခွငျးနှငျ့ အရေးပါသညျ့အခကျြမြား